IsiHlomelo se-18 siqalise i-Era yoMnqophiso
Imbali kunye neNkcubeko Ekuqaleni kwee-1900
Ukususela ngo-1919 ukuya ku-1933, ukuveliswa kotywala kwakungekho mthethweni e-United States
IsiTshintsho se-18 kuMgaqo-siseko wase-United States uvimbele ukuveliswa, ukuthengiswa, nokuthuthwa kotywala, okwaqala ixesha loNqanda . Ukulungiswa ngoJanuwari 16, 1919, isilungiso se-18 satshitshitshitshitshitshitshiyelwe ngu-21 mLungiso ngo-1933.
Kwiminyaka engaphezulu kwama-200 yoMthetho-siseko we-US, isiTshintsho se-18 sihlala sisisichibiyelo kuphela esiye sachithwa.
Umbhalo wesiHlomelo se-18
Icandelo 1. Emva komnyaka owodwa ukususela ekuvunyelwene kweli nqaku ukuveliswa, ukuthengiswa, okanye ukuthuthwa kotywala obunxilisayo ngaphakathi, ukungeniswa kwalo, okanye ukuthunyelwa kwawo kwi-United States kunye nayo yonke indawo esekelwe phantsi kwegunya layo ngenjongo yokuphuza thintela.
Icandelo 2. INkomfa kunye namazwe amaninzi aya kuba negunya elifanayo lokunyanzelisa eli nqaku ngomthetho ofanelekileyo.
Icandelo 3. Eli nqaku liza kusebenza ngaphandle kokuba livunyiwe njengesihlomelo kuMgaqo-siseko ngamanyathelo omthetho amanyeneyo aseMelika, njengoko kuhlinzekwe kuMgaqo- siseko , kwiminyaka emashumi asixhenxe ukususela ngomhla wokungeniswa kwe-States yiCongress .
Isilungiso sesilungiso se-18
Indlela eya kwinqandwe yesizwe yayigxininiswe nemithetho yelizwe ebonisa imiqathango yesizwe yokuzithoba. Kwamazwe asele anqanda ukuvelisa kunye nokuhambisa utywala, bambalwa kakhulu ababenempumelelo ngenxa yoko, kodwa isiHlomelo se-18 sizimisele ukulungisa oku.
Ngomhla ka-Agasti 1, 1917, iSeti yase-United States idlulisele isisombululo esichaza inguqu yeengxenye ezintathu ezikhankanywe apha ngentla ukuba zihanjiswe kumazwe ukuqinisekiswa. Ivoti idluliselwe kuma-65 ukuya kuma-20 kunye namaRiphabhlikhi okhetho 29 ngokusesikweni kunye ne-8 ngokuchasene ngelixa amaDemokhrasi avotela ama-36 ukuya ku-12.
Ngomhla ka-Disemba 17, 1917, iNdlu yee-Representatives yase-United States yavota ngokusesikweni isisombululo esiphenduliweyo esingu-282 ukuya ku-128, kunye namaRiphablikhi avota ukuvota 137 ukuya kuma-62 kunye nokuvotela kwezidemokhrasi 141 ukuya ku-64. Ukongezelela, ezine ezizimeleyo zavotela kunye ezimbini. I-Senate ivume le nguqulo ehlaziywe ngolandelayo ngengombolo ye-47 ukuya kwe-8 apho yaya khona kwi-States ukuze iqinisekiswe.
Ukulungiswa koHlomelo lwe-18
IsiHlomelo se-18 sagunyazwa ngoJanuwari 16, 1919, eWashington, DC kunye ne-Nebraska "yokuvota" efuna ukuchitshiyelwa kwii-36 ezifunekayo ezifunekayo ukuze kuvunywe i-bill. Kwama-48 athi e-US ngelo xesha (i-Hawaii ne-Alaska yaba ngamazwe e-US ngo-1959), kuphela i-Connecticut ne-Rhode Island inqatshelwe ukulungiswa, nangona i-New Jersey yayingayifumananga kuze kube yiminyaka emithathu kamva ngo-1922.
Umthetho weNational Prohibition wabhalwa ukuchaza ulwimi kunye nokuphunyezwa kwesilungiso kwaye nangona umongameli uSolomon Wilson ezama ukuvota isenzo, iCongress kunye neSeneti yanciphisa i-veto yakhe kwaye yabeka umhla wokuqalisa ukwenqabela eMelika ukuya ngoJanuwari 17, 1920, Umhla wokuqala ovunyelwe ngu-18 wohlengahlengiso.
Inani elininzi lamaqela achasayo-abolitionist aphakama kwiminyaka eyi-13 ezayo ekuphenduleni ingxabano ebangelwe. Nangona ulwaphulo-mthetho olunxulumene nokuxiliswa kunye nokusetyenziswa kotywala (ngokukodwa phakathi kwabampofu) ngokukhawuleza kwehla ngokukhawuleza emva kokuphunyezwa kwalo, iinqunjwana kunye neenqwelo ezinokukhawuleza zathatha i marike engekho mthethweni ye-bootleg yotywala. Emva kokubambelela iminyaka emininzi, abachasayo-abolitionists bagcina bexinze iNkcazo ukuba bathethe isilungiso esitsha kuMgaqo-siseko.
Isihlomelo sesi-21 - samkelwe ngomhla kaDisemba 5, 1933 - sichitshiyelwa kwisiHlomelo se-18, senza okokuqala (kwaye kuphela, ukuya kutsho) Uhlengahlengiso loMgaqo-siseko lubhalwa ukuba luchithwe elinye.
Ukuguqulwa kweRashiya ka-1917
Ixesha loKhuselo lwesiRashiya
Apho i-Broadway Stars iya kwiKholeji
I-10 yaseSouth Padre Isiqithi ezili-10 eziLwandle eziLwandle eziLwandle oluLwandle oluPhambili
I-Biography yoMdwebi we-Edmonia Lewis